Arlanda: Nin ku soo dhuuntay qeybta xamuulka ee diyaarada Ethiopian Airlines | Somaliska
Arlanda: Nin ku soo dhuuntay qeybta xamuulka ee diyaarada Ethiopian Airlines
Diyaarada Ethiopian Airlines oo saaka ka soo degtay ayroboorka Arlanda ayaa waxaa laga helay nin ku soo dhuuntay qeybta xamuulka ee diyaarada. Ninkaan oo la sheegay in uu caafimaad qabo ayaa waxaa ugu horeyn arkay shaqaale ka tirsan shirkada amniga ee Securitas.
Ninka ayaa la sheegay in caafimaadkiisa uu caadi yahay, iyadoo durbadiiba loo wacay shaqaalaha caafimaadka iyo booliska. Sida ninkaan uu ku soo galay qeybta xamuulka ee diyaarada ayaan cadeyn iyo cida uu yahay balse waxaa la sheegay in uu diyaarada soo raacay oo saacado badan uu qeybta xamuulka ku jiray. Sida uu ku badbaaday ayaa ah arin la yaab leh, maadaama marka diyaaradu ay hawada gasho ay aad u qaboowdo qeybta xamuulka isla markaana aysan ogsojiin lahayn.
Booliska ayaa sheegay in uusan ninkaan diyaarada ugu soo dhuuman in uu dalxiis u yimaado Sweden balse uu doonayo in uu magan-galyo dalbado. Iyadoo arintiisa lagu wareejin doono laanta socdaalka (Migrationsverket).
miiskin Alle ha u saqiiro
NIN ADAG BUU AHAA ITOOBIYA MAXAA YAALA IYO AFRICA CADAALAD IYO QABYAALAD BA ATALAA MARKAA GOAAN ADAG BUU QAATAY INUU NOLOL FIICAN HELAAN RAJAYNAYA JIMCAALE BARAYAHAN ARINKII LABADA SANO WAXBA KAMA HAYSID BANA FILYAA ABOOWE
2 sano waayahan wax ka sheekeynaa sheekadii 2 sano lama hayo macnaha sheekadii 2 sano wey dhamaatay hada taasi ma jirto
Asc Jimco iyo asxaapta 2 sano kahadasha, bilaa caleeg sheekada labada sano Waanuun arkaa mar walbee waa maxay? Bal igaadhsiiya… Waxan u qaatay dacwad hadana waxaan arkay dad intaa dadkoodii lookeeno???!!!!!
sayid laguu sheeg walal waxaa loola jeedaa macnaha adiga oo xaas kaagii dalbaday ka bacdiina laguugu diidey 2 sano lama aadan nooleyn xataa hadii hadii ay caruuri iinka dhexeyso
waa arin a yaab leh
Asc dhammaan dadka soomaaliyeed. Salaan kadib walaalayaal haddii uu jiro qof ka mid ah dadka 2 da sano oo loo diiday in DNA laga qaado. Fadlan ila soo xidhiidh Aniga ayaa talo fiican kuu haya si aad DNA u marto. Waxaad igala soo xidhiidhi kartaan emailkan: cismaanwali@hotmail.se wa bilaahi towfiiq.
ASC Cismaan mahadsanid ilaahay ha ku caawiyo sida walaalaha aad talada u siinayso warbixinta ma noo soo qori karata si aan uga wada faaiidaysano mida kale yaa maalmahan ogolaansho helay
Asc dhammaan akhyaarta sharafta leh ee ku xidhan webkan. salaan kadib. @ 2 sano walaal aniga waxaan joogaa Sweden balse xaaskeyga iyo carruurteyda ayaa joogta itoobiya oo ka mid ah dadka 2 sano lagu haystay, markii ay DNA ga ka qaadeen reerkeyga ayey diidmo siiyeen kahor inta aysan aniga iga qaadin DNA. intaa kadib waxaan qabsaday looyar Swedish ah deetana racfaan ayaan ka qaadanay diidmadii migrationska na siiyey kiiskina waxaan u dirnay maxkamada racfaanka. maxkamadii ayaa noosoo jawaabtay oo nagu tidhi xaaskada baasaboor la aqoonsanyahay ma haysato yacni aqoonsigeeda ma cadeyn karto 2 sano na lama aadan noolayn ninkada, mida kale ninkada ma cadeyn karo in uu ilmahan dhalay ama aabe u yahay ayey nagu tidhi maxkamadii racfaanka. calaakuli xaal aniga waxaan geed dheer iyo mid gaabannba u fuulay in aan cadeeyno in aan nahay waalidka saxda ah ee ilmaheena. waxaan raadiyey shirkad DNA qaada dal iyo dibad halkii ay rabto ha joogtee, dalaal badan ka dib waxaan helay shirkad DNA qaada fadhigeeduna uu yahay USA laakiin xafiis ku leh Sweden. si deg deg ah ayaan ula xidhiidhay waxaana bixiyey qarashkii DNA ga ka dibna aniga iyo xaaskeyga iyo cunageygaba DNA ayey naga qaaday. aniga Sweden ayaan kumay DNA ga Xaaskeygana waxeey ku martay Addis ababa itoobiya. bil ka bacdi waxaa gurigeyga iigu timid jawaabtii DNA ga oo warqad ku qoran kana timid Ohio USA. arintaas kadib kiis cusub ayaan u xareeyey xaaskeyga janaayo 2015 waxaana raaciyey jawaabtii DNA oo si cad u qeexaysa in aan nahay 99.9% waalidka dhalay ilmaha yar. 2 maalin kadib xaaskeyga safaarada ayaa looga yeeray wareeysi yar ayaa laga qaaday. mar aan la xidhiidhay migrashinka waxeey igu dhaheen DNA kama qaadeyno sababtoo ah waxaan aqbalnay jawaabtii DNA ga ee aad noosoo dirtay 2 bil kadibna go`aan ama jawaab ayay helaysaa xaaskada ayey igu dhaheen. insha allah waxaan rajeyneynaa in ay noqon doonto jawaab lagu farxo. dhammaan inta ila midka ahna jawaab lagu farxo ayaan u rajeynayaa… wabilaahi towfiiq.
Osman insha allah ilaahay Jawaab Lagu farxo hakaaga soo qaado anakuna waan sugaynaaye ha nooga soo qaado, teeda kale walaal waxaan ku waydiin lahaa Dacwada Cusub ma waxaad ka xaraysay Webka, Taariikhda aad xaraysay dacwada hore Goormay ahayd, se walaal markaad racfaanka qaadatay ee aad maxkamada u gudbisay intee in leeg ayay kuugu soo jawaabeen maxkamadu. jawaab ayaan kaa sugayaa insha allah
Waa la yaab
@ Mubaarak haa walaal waxaan ka xareeyey webka. dacwadii hore waxaan diray 24 may 2013. mida kale maxkamada racfaanka waxay noogu soo jawaabtay shan bilood gudahood.
Osman waad mahadsantahay walaal’ 2013 hadii dacwadaas aad xaraysay waxay ahayd intaan 2 sano LA Laalin’ alle ha inooga soo qaado oo hainoo sakhiro gaaloiyo Muslin a.
Thank you Osman alle ha inoo sakhiro.